COVID-19 oo kusoo rogaal-celiyay Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
COVID-19 oo kusoo rogaal-celiyay Soomaaliya
Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay inay diiwaangelisay kiisas aad u badan sanadkan, iyadoo dalka la filayo inuu dhawaan helo Tallaalkii ugu horeeyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya waxay cusbooneysiineysiisay ololaha wacyi-gelinta bulshadda kadib markii dalka uu kusoo noqday caabuqa COVID-19.
Shacabka waxaa loogu baaqay inay xirtaan waji-xirka [Face Mask], islamarkaana ay sameeyaan taxadir dheeraad ah, sida gacmo-dhaqa iyo kala-fogaanshaha in la ilaaliyo, oo ugu yaraan hal ama labo mitir la isku jirsado.
Waxay Wasaaradda diiwaangelisay in ka badan 4,100 oo kiis, oo ay ku jiraan 146 dhimasho ah. Soomaaliya ayaa heli doonta 1.2m tallaalka AstraZeneca aakhirka bishaan, si loo tallaalo 600,000 oo shaqaalaha Caafimaadka ee ka shaqeynaya xaruumaha COVID-19.
Wasiirka Caafimaadka Fowsiya Abiikar ayaa sheegtay in Cudurka uu hadda ka khatar badan yahay sidii hore dhanka waxyeelladiisuna badan tahay, sidaasi darteed looga baahan yahay dadweynaha inay taxadir sameeyaan.
Soomaaliya ma lahan hab Caafimaad oo xoog badan, waxaana jirin xaruumo qalab fiican yaallaan oo la dhigo dadka uu soo rito xanuunkan dilaagga ah, iyadoo Muqdisho meesha kaliya loo diyaariyay tahay Isbitaalka Martiini.
Martiini waxaa loo ogol yahay kaliya dadka da'da ah, marka oo qof dhalinyaro ah tago oo COVID-19 qaba, waxay howlwadeennada kula taliyaan inuu gurigaasi isku karan-tiillo.